धर्म कमाउन मुक्तिनाथ पुगेका तीर्थालुले फालेका अण्डरवेयरले भरिए ८ बोरा - Everest Dainik - News from Nepal
धर्म कमाउन मुक्तिनाथ पुगेका तीर्थालुले फालेका अण्डरवेयरले भरिए ८ बोरा
मुस्ताङ । प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मुक्तिनाथ पुगेपछि पापबाट मूक्ति पाइने, धर्म प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । तर त्यहाँ पुगेका केही भक्तजनले नै विवेकहीन बनेर असाध्यै फोहोर गरेको पाइएको छ । तीर्थालुले हजारौं रुपैयाँ दान गरेर मूक्तिनाथबाट फर्कन्छन् तर, यस परिसर सफा राख्ने विषयमा समितिले पटक्कै चाँसो दिएको छैन ।
मुक्तिनाथ क्षेत्रमा तीर्थालुले फ्याँकेका अन्डरवेयरले म्याग्दीका प्रकाश पौडेल र मुस्ताङका पेमा छेतेन बिकलाई हुटहुटी चलायो । जताततै फोहोर देखेपछि दुखित बनेका उनीहरुलाई मन्दिर परिसर सफा गरेर फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । उनीहरुले सरसफाइका क्रममा तीर्थालुले फ्याँकेका ८ बोरा अन्डरवेयरलाईे खाल्डो खनेर पुरे मूक्तिनाथलाई नै फोहोरबाट मूक्ति दिलाएर असल नागरिकको परिचय दिए ।
याे पनि पढ्नुस मुस्ताङको टुकुचेमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण
समितिको दान कोेषमा करोडौं रुपैयाँ मौज्जाद छ । हजारौ रुपैयाँ दैनिक भेटी जम्मा हुने गर्छ । मन्दिर परिसरको सौन्दर्य नै कुरुप हुने गरी तीर्थालुले फोहोर मिल्काइरहँदा व्यवस्थापन समितिले किन फोहोर राख्ने डस्टबिन राख्न सकेको छैन ? मन्दिरमा कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी छन् । साथै आनी र पूजारी पनि त्यही बस्छन् । उनीहरुले आफ्नै आँखा अगाडिको फोहोर टुलुटुलु हेरेर बसिरहँदा कस्तो सन्देश देला जनमानसमा ? पर्यटकले मूक्तिनाथको फोहोरको चाङ देख्दा कस्तो ठान्लान् ? यस्ता प्रश्नहरु अनुत्तरित बनेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस हिउँ पन्छाउँदै जोमसोम पुगे बस
मन्दिर आएका तीर्थालुले १ सय ८ धारा र कुण्डमा स्नान गरेपछि अन्धाधुन्ध अन्डरवेयर र फोहोर मिल्काएको पाइएको छ । यो सुहाउँदो धार्मिक सभ्यता थिएन । मन्दिर वरपरको रुखका हाँगामा समेत अन्डरवेयर ध्वजाजस्ता झुन्डिएको देखिन्थे । यसले विशुद्ध मनले पूजाआजा गर्नेलाई तीर्थालुलाई असहज बनाएको छ । यसरी फालिएका कपडालाई कसरी ,कहाँ व्यस्थित गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सूचनासम्म प्रकाशित गरिएको छैन ।
याे पनि पढ्नुस अब मुक्तिनाथ दर्शन गर्न १०० रुपैयाँ !
ट्याग्स: Muktinath Mandir, mustang